Otu esi acho uzo ohuru ahia | Martech Zone
Tuesday, January 21, 2014 Tuesday, January 21, 2014 Savannah Marie
Ọ bụ ebe mara ezigbo mma ịnọdụ ruo mgbe mmadụ niile malitere ịga ebe ahụ. ” Nke a bụ mkpesa nkịtị n'etiti hipsters. Ndị ahịa na-ekerịta nkụda mmụọ ha; ya bụ, ọ bụrụ na i jiri okwu ahụ “dị mma” dochie okwu ahụ “dị mma”.
Otu ọwa ahịa buru ibu nwere ike ida oge ya gbachapụ. Ndị mgbasa ozi ọhụụ na-ewepụ anya na ozi gị. Ọnụ na-arịwanye elu na-eme ka itinye ego ghara ịba uru. Usersgachi ọrụ na-agwụ ike ọrụ na-aga ka greener ịta nri. Iji mee ka ọrụ ahịa gị baa uru, oge ụfọdụ ị ga-eme otu ihe ahụ.
N'ụzọ dị mma, ohere mgbasa ozi ọhụụ na-apụta n'oge niile. Ha niile agaghị emeri n’ikpeazụ, mana otu ụzọ ị ga - esi chọta ezigbo ego bụ ịlele ha anya. Nke a bụ ụfọdụ ihe ị nwere ike ime iji chọta ọwa ahịa ọhụụ ma mee ka usoro ịzụ ahịa gị dị ọhụrụ.
Soro ndị na-eso ụzọ
Ntanetị buru ibu nke na ọ nweghị onye nwere ike inyocha ha niile. Ezigbo ngwá ọrụ ihe nchọgharị weebụ nwere ike ịgwa gị otu ndị ọbịa si abịa na saịtị gị, mana ị ga-achọ ịma ebe ọzọ ha na-aga ma ha pụọ. Ndị ọbịa gị nwere ike ịga na saịtị nke ịmaghị, mana tinye usoro iji soro omume ha mgbe ha anaghị eleta gị.
Ebe ọ bụ na teknụzụ dị ugbu a na-aga n'ihu, ị nwere ike ịchọ nyocha maka ozi a ụzọ ochie. Ọ bụrụ na ndị ọbịa biputere njikọ, lelee saịtị ndị ahụ. Chọpụta ndị ha na-amasị na-eso. Lelee foto ha na Pinterest na Instagram. Ọ bụ usoro na-ezughị oke, mana ị ga-enwerịrị echiche zuru oke ebe ị ga-aga, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị soro ndị ọbịa gị kachasị arụ ọrụ.
Lelee isi mmalite ọdịnaya
Imirikiti ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ nwere atụmatụ ịzụ ahịa ọdịnaya, nke pụtara na ha emegogo blọọgụ ha na vidiyo maka ọchụchọ isi (ọbụlagodi, ọ bụrụ na ha emeela ya). Oge ọzọ ị na-achọ ọdịnaya ọhụrụ, lelee isi mmalite nhọrọ kachasị amasị gị ma tinye saịtị ndị ahụ na ndepụta gị nke ọwa ọhụụ.
Iji mee ka usoro a dị ngwa, gbado anya na isi mmalite ndị na-etinye ọdịnaya dị mma mgbe niile. Bido ijikọ ọdịnaya a na weebụsaịtị gị, ka oge na-aga ị nwere ike ịjụ saịtị ahụ ka ị weghachi ihu ọma. Ọzọkwa, tụọ ọnụego pịa na njikọ ndị a. Ebe na-adọta ọtụtụ ndị ọbịa gị nwere ike ịbụ ala na-eme nri maka atụmanya ọhụrụ.
Gụọ akụkọ ndị ahụ
Iji rụọ ọrụ gị nke ọma, ị ga-amata ihe na-eme n’ụwa, na ụdị ọhụụ na ọhụụ ọhụụ na-agbada n’okporo ụzọ. Mgbasa mgbasa ozi bụ ebe dị mma iji chọpụta ha abụọ. Lelee ngwakọta nke akwụkwọ akụkọ, saịtị na-enwe mmasị n'ozuzu na mbipụta ụlọ ọrụ iji chọpụta usoro ọhụụ, ndị egwuregwu ọhụụ na ohere ịzụ ahịa ọhụụ.
Mee ihe ị na - ejikarị mee - nyochaa isi okwu ma kwụsị mgbe ihe ruru gị anya. Naanị ihe dị iche bụ na ị na-enyocha ihe dị iche. Kama ịchọta ihe dị ọhụrụ, nyochaa akụkọ ọ bụla iji chọpụta ma mgbanwe ahụ ọ ga - emetụta usoro ịre ahịa gị. Ọ bụrụ na nke a dị ogologo, debanye aha maka faili RSS ma zitere gị isi okwu.
Naanị ịmalite ile anya
You nwetụla mgbe nwere a free oge na malitere nchọgharị maka ihe niile na popped n'ime isi gị? Maka ụfọdụ, nke a bụ ụzọ iji gbuo oge. Maka ndị ọzọ, ọ bụ ụzọ dị mfe iji zaa ajụjụ na-enye nsogbu. Maka gị, ọ nwere ike ịbụ ụzọ ị ga-esi sụọ ngọngọ na ọwa ahịa ọhụụ.
Were otu elekere ma ọ bụ karịa kwa ụbọchị iji chọpụta ihe ọ bụla, n'agbanyeghị nzuzu ma ọ bụ nzuzu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ, ị nwere ike ịmalite iji ederede n'efu. Detuo echiche niile ị na-eche n’uche gị, chọọ ihe ọ bụla ị dere. Somefọdụ nyocha agaghị aba ụba, mana ụbọchị ndị ọzọ ị ga-ahụ ihe na-agba ume ọdịnaya, nke nwere ike bụrụ ohere ịme njikọ.
Enweghị atụmatụ ahịa ọ bụla na-aba uru ruo mgbe ebighị ebi. Anọla naanị ọdụ wee nwee ọmarịcha nsonazụ; na-acho uzo ahia ohuru ma wulite ahia ahia nke na adighi aka.
Tags: nkwurịta okwuahia ọwaotutu ahia ahianetwọk mmekọrịtaTechnology
Savannah Marie Tuesday, January 21, 2014 Tuesday, January 21, 2014
Savannah Marie bụ onye edemede na-enweghị akwụkwọ na onye na-anụ ahịa n'ịntanetị. Ọ na-anụ ọkụ n'obi ịgbaso SEO, ịntanetị na usoro mmekọrịta. Soro ya gaa Twitter na Google+.
Metric Marketing nke Dị Mkpa